ajụjụ VRS SUPERBUG X
1 afọ 11 ọnwa gara aga - 1 afọ 11 ọnwa gara aga #415 by Colonelwing
bụ ihe kasị zuru ezu na ezi ịme anwansị nke a ọgụ ugbo elu mgbe e mepụtara maka Microsoft Flight Simulator. The Superbug bụ njedebe nke ihe fọrọ nke nta 10 ọrụ afọ-akpa azụ ka FS2004, na-aga n'ihu na-akwado na Ugboro releases. Si avionics ka ngwá agha usoro, ma ọ bụrụ na ọ bụ na ezigbo ugbo elu, o nwere ike ịbụ na a ịme anwansị! The Superbug bụ nke mbụ (na na) ezi 3-axis ada-site-waya ọgụ ugbo elu mere maka FSX. The ụgbọ elu akara usoro bụ a "ofufe-site-waya-dị ka" CAS, ọ bụ kpam kpam ike, n'ụzọ zuru ezu ịchịkwa-iwu-agbado proportional usoro na-akwọ ụgbọala otu (ikpé onwe ha) neutrally-statically-anụ isi elu nlereanya. The FBW usoro emekọ 100% omenala autopilot na ụgbọ elu director ọrụ.
Ọ bụrụ na gị na-achọ a n'ezie ahụhụ ,, Nke a bụ onye ị chọrọ ofufe na gia ke Gentelmen!
VRS Nkwado Forums
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 11 ọnwa gara aga Colonelwing.
1 afọ 11 ọnwa gara aga - 1 afọ 11 ọnwa gara aga #423 by Gh0stRider203
dị nnọọ agbarapụ ahapụ a ebe a
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 11 ọnwa gara aga Gh0stRider203.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #424 by Colonelwing
Haaaaaa ,, otú gị a mara ihe Ihọd eh !!!
1 afọ 11 ọnwa gara aga #429 by Gh0stRider203
Oge ike page: 0.406 sekọnd